အသားစား အပင် - ဝီကီပီးဒီးယား
ဟယ်လီယမ်ဖိုရာ ခိုင်မန်တန်းဆစ် မျိုးရင်း၏ ရှေးကျသော ရေကရားပင် မျိုးစိတ်များသည် တွင်းပေါက်ထောင်ချောက်ပါ အသားစား အပင်များ၏ နမူနာပုံစံဖြစ်သည်။
Drosera capensis မျိုးစိတ် အပင်၏ စေးကပ်သော ဂလင်းများပါသော လက်တံများမှ လှုပ်ရှားပြုမူပုံ
နတ်သမီး ပိုးကောင်ထောင်ချောက်ပင်- ဒုတိယ အကြိမ် ထိတွေ့မှုအပေါ် တုံ့ပြန်မှု ပြုပုံကို ပြသထားခြင်းဖြစ်သည်။
အသားစားအပင်များသည် ထောင်ချောက်များဖြင့် တိရစ္ဆာန်များကို ဖမ်းယူ စားသုံးခြင်းဖြင့် အာဟာရ ရယူကြသည့် အပင်များဖြစ်သည်။ များသောအားဖြင့် အင်းဆက်ပိုးမွှားများကို ထောင်ချောက်ဆင်ဖမ်းယူ၍ စားသုံးလေ့ရှိသောကြောင့် ၎င်းတို့ကို အင်းဆက်စား အပင်များဟုလည်း ခေါ်ဝေါ်လေ့ရှိသည်။ တိရိစ္ဆာန်များထံမှ ၎င်းတို့အတွက် အစာအာဟာရ အချို့ကို ရရှိနိုင်သောကြောင့် အသားစားအပင်များသည် မြေဆီလွှာပါးလွှာသော နေရာများ သို့မဟုတ် အာဟာရချို့တဲ့သော မြေနေရာမျိုးများတွင် ပေါက်ရောက်ရှင်သန်နိုင်ကြလေသည်။ နိုက်ထရိုဂျင်ဓာတ် အနည်းငယ်သာရှိသော မြေဆီလွှာများဖြစ်သည့် အက်ဆစ်ဓာတ်ရှိသော ရေဝပ်မြေများနှင့် ကျောက်များသော မြေများတွင်လည်း ပေါက်ရောက်ရှင်သန်နိုင်ကြ၏။ ချားလ်စ် ဒါဝင်၏ ၁၈၇၅ ခုနှစ်တွင် ရေးသားခဲ့သော အသားစားအပင်များအကြောင်း စာအုပ်သည် ၎င်းအပင်များနှင့်ပတ်သက်​၍ လူသိများခဲ့သည့် ပထမဆုံးသော စာအုပ်ဖြစ်လေသည်။ 
ထိုအပင်များ၏ တိရစ္ဆာန်များကို ဖမ်းယူစားသုံးနိုင်ခြင်း စွမ်းရည်သည် စစ်မှန်သော အသားစားခြင်း အပြုအမူပင်ဖြစ်သည်။ မျိုးရင်း ၅ မျိုးတွင် အသီးသီးပါဝင်ကြသော မျိုးစု ၁၂ မျိုးရှိသည်ဟု သိရ၏။ ၎င်းတို့တွင် သားကောင်များ ကို ဆွဲဆောင်ပြီး ထောင်ချောက်ဆင်သည့် မျိုးစိတ် ပေါင်း ၆၂၅ မျိုးခန့် ပါဝင်သည်။ အစာခြေ အင်ဇိုင်းများ ထုတ်လုပ်ကာ ၎င်းတို့၏ အာဟာရများကို အသုံးပြုသည်။ ထို့အပြင် ဤလက္ခဏာများအားလုံးကို မပြသနိုင်သော်လည်း စရိုက်လက္ခဏာ အချို့ကို ပြုမူသော အပင် မျိုးစိတ်ပေါင်း ၃၀၀ ကျော်လည်းရှိသေးကြောင်း သိရပြီး ၎င်းတို့ကိုမူ ရှေ့ပြေးပုံစံပြ အသားစားအပင်များ ဟုသာ ခေါ်ဆိုသုံးနှုန်းလေ့ရှိ၏။
အသားစား အပင်များတွင် အင်းဆက်ပိုးကောင်များအား ထောင်ချောက်ဆင်ဖမ်းယူရန် ရေကရားအိုး (သို့) အိတ်ကဲ့သို့ ပုံစံရှိသော အရွက်များရှိကြသည်။ ယနေ့ခေတ်တွင် အမျိုးမျိုးသော ထောင်ချောက်ဆင်နည်း (၅)မျိုးကို သိပ္ပံပညာရှင်များမှ လေ့လာသိရှိပြီးဖြစ်သည် -
ကရားရေလွှတ် ထောင်ချောက်များဖြင့် အပင်များ(ရေကရားပင်များကဲ့သို့) သည် အစာခြေအင်ဇိုင်း သို့မဟုတ် ဘက်တီးရီးယားများပါဝင်နေသော လိပ်နေသည့် အရွက်များဖြင့် သားကောင်များကို ထောင်ချောက်ဆင်ကြသည်။
ယင်ဖမ်း စက္ကူကဲ့သို့သော ထောင်ချောက်များဖြင့် အပင်များသည် စေးကပ်သော အကျိအချွဲများကိုသုံး၍ ထောင်ချောက်ဆင်ကြသည်။
လျှပ်တစ်ပြက်ထောင်ချောက်များဖြင့် အပင်များသည် ၎င်းတို့၏ လျင်မြန်သော အရွက်လှုပ်ရှားမှုများဖြင့် ထောင်ချောက်ဆင်ကြသည်။
အိတ်ပုံစံ ထောင်ချောက်များသည် အတွင်းပိုင်းမှ လေဟာနယ်ပြုလုပ်နိုင်သည် အိတ်ပုံစံရှိသော အရွက်များဖြင့် သားကောင်ကို စုပ်၍ ဖမ်းယူကြသည်။
ကျောက်ပုစွန်ဖမ်းအိုးပုံစံ ထောင်ချောက်များသည် သားကောင်များအား ၎င်း၏အတွင်းဖက်သို့သာ ချောမွေ့စွာဝင်ရောက်နိုင်စေသော အမွှေးများဖြင့် အစာခြေအင်္ဂါတစ်ခုဆီသို့ တွန်းပို့စေသည်။
အစောဆုံး လူသိများသော အသားစားအပင် Archaeamphora ကို အနုပညာရှင်၏ ရှုမြင်ထား ပုံ
ကျောက်ဖြစ်ရုပ်ကြွင်း အသားစားအပင် အနည်းငယ်ကို တွေ့ရှိရပြီး အများစုမှာ အစေ့ သို့မဟုတ် ဝတ်မှုန်များသာဖြစ်၏။ အသားစားအပင်များသည် ယေဘူယျအားဖြင့် ပင်စည်သား သို့မဟုတ် အခေါက်မရှိဘဲ ဟင်းသီးဟင်းရွက်ကဲ့သို့သော အပင်များသာလျင်ဖြစ်သည်။ စစ်မှန်သော အသားစားခြင်း အပြုအမူသည် အနည်းဆုံး ခြောက်ကြိမ်ခန့် အမှီအခိုကင်းစွာ ဆင့်ကဲပြောင်းလဲလာခဲ့ကြခြင်းဖြစ်မည်ဟု ပညာရှင်များက သုံးသပ်ထားသည်။ 
ထောင်ချောက်အမျိုးအစားအားလုံးတွင် အလားတူအခြေခံဖွဲ့စည်းပုံဖြစ်သော အမွှေးအမျှင်ရှိသော အရွက်များရှိသည်ဟု အချို့က ယူဆကြသည်။  အမွှေးအမျှင်ရှိသော အရွက် များသည် ဘက်တီးရီးယားများ ကြီးထွားမှုကို ကူညီပေးသည့် မိုးရေများကို ထိန်းသိမ်းထားနိုင်ကြလေသည်။ အရွက်ပေါ်ရှိ အင်းဆက်ပိုးမွှားများသည် ရေ၏ မျက်နှာပြင်တင်းမာမှုကြောင့် ဖမ်းမိပြီး အသက်ရှုကြပ်သည်။ ဘက်တီးရီးယားများသည် ဆွေးမြေ့စပြုလာသည့် အင်းဆက်ပိုးမွှား အသေကောင်များမှ အာဟာရဓာတ်များကို ထုတ်လွှတ်သည်။ ထို့နောက် အပင်သည် ၎င်း၏ အရွက်များမှတဆင့် အာဟာရများကို စုပ်ယူကြသည်။ ဤကဲ့သို့ 'အရွက်များမှတဆင့် အစာစားသုံးခြင်း' ကို အသားစားမဟုတ်သော အပင်များစွာတွင်လည်း တွေ့နိုင်သည်။ ရေနှင့် အင်းဆက်ပိုးမွှားများကို ကောင်းစွာထိန်းနိုင်သောအပင်များသည် ရွေးချယ်နိုင်သော အားသာချက်ရှိသည်။ အရွက်များကို ခွက်ဖြင့် အုပ်ခြင်းဖြင့် မိုးရေကို ထိန်းသိမ်းနိုင်ပြီး တွင်းပေါက်များကို ထိန်းထားနိုင်သည်။ တဖန် အချို့သော အပင်များသည် အရွက်ကို စေးကပ်စေကာ ပိုးကောင်များကို ထောင်ချောက်များထံသို့ ဦးတည်စေခြင်းဖြင့် အင်းဆက်များကို ဖမ်းမိနိုင်သည်။
↑ ချားလ်စ် ဒါဝင် (1875)။ အသားစားသော အပင်များ။ လန်ဒန်မြို့: John Murray။ 2006-10-23 တွင် မူရင်း အား မော်ကွန်းတင်ပြီး။ 2008-10-27 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ Albert V.A. Williams S.E. and Chase M.W. 1992. Carnivorous plants: phylogeny and structural evolution. Science 257: 1491–1495.
↑ Slack A (1988)။ Carnivorous plants။ London: Alphabooks။ pp. 18–19။
"https://my.wikipedia.org/w/index.php?title=အသားစား_အပင်&oldid=730331" မှ ရယူရန်
ဤစာမျက်နှာကို ၁၈ ဇန်နဝါရီ ၂၀၂၂၊ ၀၅:၅၉ အချိန်တွင် နောက်ဆုံး ပြင်ဆင်ခဲ့သည်။